Lelee Nhọrọ Keyword gị na Adwords | Martech Zone
Lelee Nhọrọ Keyword gị na Adwords
Sunday, May 24, 2009 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Google Mgbasa ozi
Izu a, m nọ na Houston na Austin na-ekwu okwu ma bụrụ ndị otu ntụpọ maka nke ha Nchịkọta Ahịa n'ịntanetị. Jide n'aka na ị lelee obodo ha na peeji nke Agendas ma gaa na ihe omume… njirimara nke ngosi ndị pụtara ìhè ma nwee nzukọ ọgbakọ, Aaron Kahlow, mere ka ihe omume ahụ na-atọ ọchị.
Nyaahụ m na-akọrọ a n'ọnụ site Ojuju Apogee na ịzụ njikọ na saịtị nke atọ. Otu ndụmọdụ ọzọ m natara na nzuko ahụ yiri ka ngụkọta nke mbido. Ikwu eziokwu, Echere m na Google Adwords defaulted to an otu egwuregwu, ma ha anaghị eme ya! Ha ndabara ka a obosara egwuregwu (yiri ọjọ ọ bụrụ na ị jụọ m)! Enwere ụdị 4 nke algorithms dabara:
isiokwu = Egwuregwu sara mbara
“Isiokwu” = dakọtara nkeji okwu
[isiokwu] = dakọtara kpọmkwem okwu naanị
- isiokwu = adabaghi ​​okwu a
Na m Weebụsaịtị nke ndị agha NavyAhụwo m ọtụtụ mgbasa ozi ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na-abịa! Ekwenyesiri m ike na ọ na-akụtu okwu nke 'Vet', mana onye mgbasa ozi kwesịrị ịgba mbọ hụ na ọ na-achọ Vet, ma hụ na ọ dakọghị 'Navy Vet'.
Ikpeazụ ndetu, ma ọ bụrụ na ndị ochie Adwords interface mgbagwoju anya ị… M ziri ezi n'ebe gị. M wee banye taa na ọhụrụ beta interface bụ nnọọ mma. E kwesịrị inwe njikọ na n'elu aka nri iji hụchalụ ya ma ọ bụrụ na ịnweta ohere. Na interface ọhụrụ, isiokwu dabara na nzuzo zoro kpamkpam na ịkwesịrị pịa njikọ iji gbasaa ya!
Tags: pịazoomgoogle adwordsisiokwuomsppc
Asụsụ Ahụ Dijitalụ na Nzukọ Ahịa Online
Jun 5, 2009 na 5: 09 PM
Inwe ihe kwesiri ppc isiokwu egwuregwu ụdị nwere ike inwe nnukwu mmetụta dị mma na mkpọsa ahụ. Otu mgbe m jisiri ike belata cpa budata naanị site na ịgbanwee mkpụrụokwu ole na ole iji kwado egwuregwu.